Home / स्वास्थ्य / महिनावारी पछि सार्न औष`धि लिनु स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ ? डाक्टरको यस्तो छ सल्लाह (भिडिओ)
admin November 14, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 176 Views
के सेक्स र आकस्मिक ह्रदयघातबीच सम्बन्ध छ ?
अण्डा खाएपछि भुलेर पनि खान नहुने यी २ चिज, नत्र पछुताउनु पर्ला !
महिलाले अँगालो हाल्दा के हुन्छ ? यो तथ्य सायद धेरै कमलाई मात्र थाहा होला, एकचोटी पढ्नुहोस !
महिनावारी सुकेका महिलामा ६ महिनामा र`गत बगेको देखियो भने यसलाई ख`तराको संकेतको रुपमा मानेर चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।महिनावारीको समय`मा देखिने समस्या र गडबढी`लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलमा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सलिनाशाक्यसँग हामीले भिडियो कुराकानी गरेका छौं।
Previous खाजा खाएको भिडियो खिचेर “काण्ड” भन्दै युट्यूबमा हाल्ने ३ जना युट्युबर पक्रा’उ
Next यी ४ ठाउँमा कालो कोठी भएका व्यक्तिसँग कहिलै हुँदैन धनको कमी
तनाव बिनाको मानिस नै हुँदैन। मानिसमा कुनै न कुनै तनाव हुन्छ नै। अलि-अलि मानसिक तनाव …